Nahazoana alalana amin'ny mpivarotra marijuana any Massachusetts
Ny fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny Marijuana Retailer Massachusetts dia dingana voalohany tokony hokarakarain'ny mpandraharaha rongony mipetraka any amin'ny fanjakan'ny bay raha te hanokatra dispensaire izy ireo.
Araka ny lalàna farany, Massachusetts Marijuana Retailer Licence dia antontan-taratasy ara-dalàna manome alalana ireo orinasa hividy sy hanatitra vokatra rongony sy rongony avy any amin'ny Marijuana Establishments ary hivarotra na raha tsy izany, afindra amin'ny Marijuana Establishments sy amin'ny mpanjifa ny vokatra marijuana sy marijuana.
Raha ny filazan'ny CCC, mitovy amin'ny rongony amin'ny fampiasana ara-pahasalamana, ny vokatra rongony azo hanina ho an'ny olon-dehibe dia tsy tokony hoheverina ho sakafo ary noho izany ny mpivarotra ambongadiny dia tsy iharan'ny fitsirihana ataon'ny Birao misahana ny fahasalamana eo an-toerana eo ambanin'ny 105 CMR 590 raha tsy hoe avoaka ny lalàna mifehy izany. .
Ny mpivarotra ambongadiny marijuana dia manome toerana fivarotana izay azon'ny mpanjifa idirana amin'ny 21 taona no ho miakatra na, raha miaraka amina RMD ny mpivarotra dia olona manana fisoratana anarana mahafeno fepetra miaraka amin'ny Medical Use of Marijuana Program miaraka amin'ny karatra fisoratana anarana.
Ahoana ny fomba fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny mpivarotra marijuana any Massachusetts
Raha te handefa ireo fizarana ireo dia mila mamorona kaonty ianao ao Tranonkala MassCIPortal ary midira ao amin'ny vavahady, mizaha amin'ny alàlan'ny pejy ary atombohy amin'ny fomba saika ny fampiharana.
Hetra amin'ny varotra antsinjarany
Ny hetra haba dia arotsaka amin'ny fivarotana marijuana na vokatra rongony ataon'ny mpivarotra marijuana amin'ny olon-kafa ankoatry ny fananganana marijuana amin'ny tahan'ny 3.75 isan-jaton'ny vidin'ny varotra voarain'ny mpivarotra marijuana ho fiheverana ny fivarotana marijuana. na vokatra rongony. Ny hetra haba dia alaina ho fanampin'ny hetra an'ny fanjakana napetraka amin'ny fivarotana fananana na serivisy araka ny voalaza ao amin'ny fizarana faha-2 amin'ny toko faha-64 amin'ny lalàna ankapobeny ary ny mpivarotra marijuana dia tokony homena ny kaomisera amin'ny fotoana voatondro hametrahana ny fiverenana. takian'i fizarana 16 amin'ny toko 62C an'ny lalàna ankapobeny.
Ny tanàna na tanàna rehetra dia mety mametraka haba amin'ny varotra eo an-toerana amin'ny famarotana na famindrana marijuana na vokatra rongony ataon'ny mpivarotra marijuana miasa ao an-tanàna na tanàna amin'ny olon-kafa ankoatry ny fananganana marijuana amin'ny taha tsy mihoatra ny 2 isan-jaton'ny varotra rehetra. vidiny azon'ilay mpivarotra ambongadiny marijuana ho fiheverana ny fivarotana rongony na vokatra rongony. Ny mpivarotra marijuana dia handoa hetra amin'ny varotra eo an-toerana apetraka eo ambanin'ity fizarana ity amin'ny kaomisera amin'ny fotoana mitovy sy amin'ny fomba mitovy amin'ny hetra amin'ny varotra noho ny fiombonambe.
Ny vola rehetra raisin'ny kaomisera ao amin'ity fizarana ity dia tsy tokony horaisina amin'ny vola iraisan'ny marimaritra iraisana ary farafahakeliny haparitaka, omena ary aloan'ny mpitambolam-panjakana rehefa voamarina ny kaomisera isaky ny tanàna na tanàna nanangana ity faritra ity ampitahaina amin'ny habetsaky ny vola azo avy amin'ny fivarotana na famindrana marijuana sy vokatra rongony ao an-tanàna na tanàna.
Ny tanjon'ny fifamatorana dia ny handoavana ny vidin'ny kaomisiona mba hanomezana fahafaham-po ny adidy ara-panjakana sy ny varotra eo an-toerana, ny vola lany amin'ny fiantohana ny marijuana manana fahazoan-dàlana, ny vola lany amin'ny famotehana ireo vokatra marijuana sy marijuana ao amin'ny fitehirizam-bokiny, ny vola hafa nateraky ny vaomiera na ny voatendry amin'ny famongorana na fanidiana ny trano misy ny fahazoan-dàlana mifanaraka amin'ny politikany sy ny lalàna mifehy azy.